केटाकेटीमाथिकाे थिचाेमिचाे सामाजिक सञ्जालमै छरपस्ट छ, कसैले उजुरी नै गर्नुपर्छ र ?
- सक्रिय संग्राैला | मंगलबार, भदौ २९, २०७८
सक्रिय संग्राेला, सेकेन्डरी बाेर्डिङ स्कुल, इटहरी-४, सुनसरी, कक्षा-८ ।
मिडियामा हामीजस्ता केटाकेटीको बारेमा धेरै मान्छेले धेरै कुरा गरेको सुन्छु । कोहीकोही त हाम्रो अधिकारका लागि काम गरिरहेका छन् रे ! उनीहरूसित मेरा केही गुनासा छन् ।
तपाईंहरू युट्युब, टिकटकजस्ता सोसल मिडिया त पक्कै हेर्नुहुन्छ । हेर्ने गर्नुभएको छैन भने हेर्नुहोला, त्यहाँ केटाकेटीको बारे केकस्ता भिडियोहरू राखिएका छन् ।
बाउआमाको झगडामा बच्चाहरूलाई अगाडि राखेर भिडियो खिचिएको छ । टिकटकमा बच्चालाई जबर्जस्ती देखाइएको छ । ‘भाइरल’ गराउने वा आफू भाइरल हुने लोभमा बालबालिकामाथि अत्याचार भइरहेको छ ।
केही महिनाअघि बालगायक मित्र सचिन परियारको बाउआमाको झगडामा सचिन र उनका भाइबहिनीको समेत भिडियो खिचेर युट्युबमा राखिएको थियो । यति मात्र कहाँ हो र, भिडियो बनाउनेहरूकै कारण सचिन स्कुल नै जान नपाएका कुराहरू मिडियामा आएको थियो । तर, मैले कुनै बाल अधिकारकर्मीबाट सचिनमाथि भएको त्यसखाले अन्यायको विरोध सुनिनँ ।
टिकटकमा अन्दाजी ९/१० वर्षजतिकी एक साथी पनि केहीअघि भाइरल थिइन् । छिमेकी ‘दाइ’ले उनलाई जिस्काउँदै भिडियो बनाए र टिकटकमा हालिदिए । भिडियोमा रिसाउँदै बाेलिरहेकी उनलाई ती दाइले भिडियो खिचिरहेको कुरा थाहै थिएन । यो ठीक हो त ?
हामीजस्ता बालबालिकाको अधिकारका लागि विभिन्न संघसंस्थाहरू छन् । तर, सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट कुराहरूबारे पनि कसैले उजुरी नै गर्नुपर्छ र ?
दुई वर्षअघि म काठमाडौं घुम्न गएको थिएँ । त्यसबेला सडकमा मजस्तै केटाकेटीहरू माग्दै गरेको देखेर मलाई धेरै दुःख लाग्यो । म फेरि केही दिनअघि मात्र काठमाडौं गएँ । बौद्ध, चाबहिलतिर त्यस्तै देखेँ । अस्ति नै टिभी हेर्दा प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्थ्यो– सडकमा अब बेसहारा मान्छे भेटिने छैनन् । तर, मैले त देखेँ ।
चाहे त्यो सरकार होस् वा बालबालिकाका लागि बनेका संस्था, कुरा होइन काम गर्नुहोस् । तपाईंहरूले गरेर देखाउनुभयो भने पो ठूलो भएपछि हामीले पनि सिक्ने कुराहरू रहन्छ । नत्र हामी पनि त्यस्तै देखावटी बन्ने छौँ । अनि यस्तो सिलसिला चलिरहने छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २९, २०७८, ०८:३५:००